Kungani kukhonzwa onkulunkulu abehlukene? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Kungani kukhonzwa onkulunkulu abehlukene?
Abantu bangacasukelana ngenxa yenkolelo yabo kokuhlukile uNkulunkulu, engaqapheli ukuthi wonke umuntu uxhuma noNkulunkulu ofanayo. Inkohliso yokuthi kunonkulunkulu abahlukene emhlabeni wonke, kungumphumela wokuphila emphakathini ochuma ngokwehlukana.
UNkulunkulu enguMthombo, uhlukanisa izinhlobo eziyisikhombisa zokukhanya Ama-Rays ukuze ulethe izinketho ezihlukile zokuxhuma. Lokhu kukhetha okuyisikhombisa kuyahlukana, kuvumela izinkolelo ezingeziwe ukuthi zenziwe. Ukuxhumana ngakunye nezinkolelo kuyehluka kuye ngokuthi umuntu angahlobana kanjani nalokho. Ekugcineni, uMthombo uyazi ukuthi konke ukukhanya kuzobuyiselwa emuva uqobo.
Abantu bahlukile futhi babona impilo ngokwehlukile. Nginomuzwa wokuthi ukuba nezinketho eziningi zokukhulekela uNkulunkulu, kunika abantu indlela abangakhululeka ngayo futhi baxhumane nabo futhi. Ekupheleni kosuku, abantu bangathatha noma iyiphi indlela evumelana nabo kodwa sonke singagcina sesiya endaweni efanayo, uMthombo.
Amathegiukuqonda onkulunkulu abahlukahlukene ukukhula komuntu siqu ingokomoya Hlanganisa yokukhulekela